Topaz waa gemstone aad caan u ah laakiin cat's topaz indhaha waa dhif - fiidyow
Iibso dukaanka indhaha bisadaha dabiiciga ah ee topaz
Topaz waa gemstone aad u caan ah laakiin topaz indhaha bisadu waa dhif. Labada ilood ee ugu waaweyn waa Burma (Myanmar) iyo Madagascar
Topaz saafi waa mid aan midab lahayn oo hufan, laakiin badanaa waxa lagu dhejiyaa waxyaabo aan nadiif ahayn, topazkani waa khamri cas, jaale ah, midab cawl, casaan-casaan, ama buluug. Waxay kaloo noqon kartaa caddaan, cagaaran cagaaran, buluug, dahab, casaan (naadir), guduudan-casaan ama calaacal ah oo hufan / turjumaan.
Topaz Orange, waa astaamihii dhalasho ee dhaqameed ee Noofembar, astaantii saaxiibtinimada, iyo dahabkii gobolka Utah ee Mareykanka.
tobasiyos Imperial waa huruud ah, pink (dhif, haddii dabiiciga ah) ama casaan-orange. Brazil Imperial iyo saamaha oo inta badan ku yeelan karaan jaale dhalaalaya in ay cado qoto dheer brown dahabka, mararka qaar xitaa buluug. topazes badan oo brown ama cirro leh loola dhaqmo si ay u dhalaalaya huruud ah, dahab, casaan khafiif ah ama buluug midab dhigi. Qaar ka mid ah dhagaxyada iyo tobasiyos Imperial ku baxayn karaa hoosjoogsiga iftiinka cadceedda muddo dheer.
Topaz buluuga ah ayaa ah dhagaxa weyn ee gobolka Texas ee Mareykanka. Si dabiici ah buluug u dhacda ayaa aad u yar. Caadi ahaan, midab la'aan, cawlan ama midab huruud iyo buluug ah ayaa kuleylka lagu daaweeyaa oo la duudsiiyaa si loo soo saaro buluug mugdi ah oo aad u sii badan.
Topaz badanaa waxay la xiriirtaa dhagaxyada silikiciga ah ee dabiiciga ah iyo nooca riyolite. Caadi ahaan waxay ku dhalaalaysaa pegmatit granitic ama godadka dhuxusha qulqulka qulqulka qulqulka ee ay ka midka yihiin buuraha Topaz ee galbeedka Utah iyo Chivinar ee Koonfurta Ameerika. Waxaa laga heli karaa florit iyo cassiterite meelo kala duwan oo ay ku jiraan buuraha Ural iyo Ilmen ee Ruushka, Afghanistan, Sri Lanka, Czech Republic, Jarmalka, Norway, Pakistan, Talyaaniga, Sweden, Japan, Brazil, Mexico, Flinders Island, Australia, Nigeria iyo Mareykanka.
Saamaynta indhaha ee Cat
Mawduucyada mawduucyada, sheeko-xumada, sidoo kale sheeko-wareedka ama waxtarka isha ee bisada, ayaa ah raad-galka maskaxeed ee muuqaalka muraayadaha qaarkood. Waxaa laga soo qaatay Faransiiska "oeil de chat", oo macnaheedu yahay "bisadaha isha", wada sheekaysigu wuxuu ka soo baxaa qaab dhismeedka qalabka wax lagu duubo, sida turmaline indhaha isha, bisadda isha topaz, ama ka soo goyso xayawaanka ama godadka gudaha dhagaxa, sida kalluunka indhaheedu waa chrysoberyl. Cilad-celinta keena hadalka waa cirbadaha. Shaybaarka la baaray ayaa keenin caddaynta tuubooyinka ama fareemada. Cirbadaha ayaa dhammaantood si taxadar leh u habeeya marka la eego waxyeellada indhaha. Qiyaasta guluubka cirbadaha ee cirbadaha waxay ku egtahay mid ka mid ah saddexda qalabka kareemeed ee orthorhombic chrysoberyl, taas oo ka dhalatay isku dhafan dhinaca jihadaas.
Dhacdadu waxay u egtahay nacasta dharka birta. Nalalka iftiinka ee iftiinka iftiinka ah ayaa had iyo goorba u weheliya jihada fiilooyinka. Wixii dhuxul dhagax ah si ay u muujiyaan waxtarkiisa si fiican, qaabku waa inuu yahay cabokoon. Ku wareegsan saldhiga salka, halkii uu ka muuqan lahaa, dhejisyada ama dhismayaasha fiboorka oo barbar socda saldhigga maraakiibta dhammeeyey. Noocyada ugu wanaagsan ee la dhamaystiray waxay muujinayaan hal hal ah. Qeyb ka mid ah iftiinka oo ka dhaqaaqa dhagaxa marka uu soo laabto. Dhagaxyada kulaylka ah ee tayada yaryar waxay muujinayaan saameyn la taaban karo oo la mid ah noocyada caanaha iyo indhaha ee quartz. Dhagaxyo fiiqan ma muujiyaan si fiican.
Bisadaha isha tooda ee 'Burma'
Kornerupine indhaha isha
Tags isha Cat ee, Kornerupine
Muuqashada miisaanka danburite
Tags isha Cat ee, Danburite
Maqaarka indhaha aquamarine
Tags Aquamarine, isha Cat ee